आफ्नो मृत छोराको वीर्यको प्रयोग गरेर एक आमा बनिन् हजुरआमा – Superhit News
March 1, 2018 superhit news0Comments
दुई वर्ष अघि क्यान्सरको कारण आफ्नो छोरा गुमाएकी एक आमाले आफ्नो कोशिसले उनलाई पुनर्जीवित गरेकी छिन् ।
पुणेकी ४९ वर्षीय शिक्षिका राजश्री पाटिलले एक सेरोगेट आमाको मद्दतबाट आफ्नो विवाह नभएई मरेको छोराको जुम्ल्याहा बच्चा जन्माएकी छिन् ।
यो कुनै चमत्कार होइन बरु विज्ञानको कमाल हो, जसले एक आमाको दुःखी अनुहारमा फेरी मुस्कान ल्याएको छ ।
प्रथमेशको जुम्ल्याहा बच्चाको जन्म उसको शुक्रकिटको मद्दतबाट भएको हो, जसलाई उनको मृत्यु अघि सुरक्षित राखिएको थियो ।
२७ वर्षको जवान छोराको सुरक्षित वीर्यको प्रयोग राजश्रीले सेरोगेट गर्भमा गरिन् । प्रथमेशको बच्चाले १२ फ्ब्रुअरीमा जन्म लियो । हजुरआमा राजश्रीले बच्चालाई भगवानको आशिर्वाद बताउदै नातिको नाम छोराको नाम प्रथमेश नै दिएकी छिन् भने नातिनीको नाम प्रीशा राखेकी छिन् ।
आफ्नो छोरा पुनरप्राप्त पाएकी ठान्ने राजश्रीले यसका लागि जर्मनीसम्मको यात्रा गरिन । उनले जर्मनी गएर छोराको वीर्य हासिल गर्नको लागि आवश्यक सबै औपचारिकता पुरा गरिन् । फर्केर उनले पुणेको सह्याद्रि अस्पतालमा आईवीएफको साहारा लिइन् ।
अस्पतालकी आईवीएफ विशेषज्ञ डा. सुप्रिया पुराणिक भन्छिन्,“आईवीएफ प्रक्रिया हाम्रो लागि प्रत्यक दिनको काम हो । तर यो केस अनौठो थियो । यसमा एक यस्तो आमाको भावना जोडिएको थियो जो कुनै पनि मुल्यमा आफ्नो छोरालाई फिर्ता पाउन चाहन्थिन् । पूरा गर्भको दौरान राजश्रीको प्रतिक्रिया निक्कै सकारात्मक रह्यो ।”
← सी सेक्सन डेलिभरी : पैसा कमाउनकै लागि हुन्छ अप्रेसन !
ध्यान र समय →